MAXAY BULSHADU U RUMAYSATAA BEENTA CADOWGU KA FAAFINAYO SOMALILAND? |
MAXAY BULSHADU U RUMAYSATAA BEENTA CADOWGU KA FAAFINAYO SOMALILAND?
Soomaalidu waxay ku Maahmaahdaa Si xun wax u sheeg sixirka darane” Maalinba maalinta ka dambeysa waxaad baraha bulshadu ku kulanto iyo warbaahinta qaar ku arkaysaa war togan ama taban oon haddana sal iyo raad toona lahayn oo laga sheegayo madaxda dawladda iyo Xisbiyada qaranka Somaliland.Waxa u dambeysay xafladii ay ku martiqaadeen Jaaliyadda Somaliland ee Dalka Sucuudigu Wasiirka wasaarada Madaxtooyada Mudane Maxamud Xashi Cabdi oo halkaa u joogay hawlo cibaado , markuu la hadlayey jaaliyada hadalkiisa waxa ka mid ahaa isagoo lahadlaya Madaxda Dawlada Soomaaliya inay ixtiraamaan heshiiskii labada Madaxweyne kala saxeexdeen, oo uu uga jeeday kii dalka Djibouti. markiiba waxa ummada loogu turjumay heshiiskaasi inuu yahay mid ummada laga qarinayo oo Dekada iyo Madaarka Berbera ah oo Soomaaliya innoo saxeexday. in badan oo aan ka mid ahay waxay u fahantay heshiiska Wasiirku ka hadlayaa ee labada Madaxweyne kala saxeexdeen inuu yahay kii Shirka Djibouti.
Qodobbadii Heshiiska labada wadan kala saxeexdeen waxa ka mid ahaa qodobbadan hoose waxaanu u dhignaa sidan:-
Madaxweyne Dawlada Federal ka Somalia Md. Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dawladda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxay ku kulmeen Magaaladda Djibouti 21/12/2014. Waxay labada madaxweyne isla garteen:
In la dardar-geliyo wada hadalada labada dhinac,isla markaana wakhti lagu jaan-gooyo.
2- labada dhinac waxay ku heshiiyeen in arrimaha siyaasiga ah ee masiiriga ah lagu dhiirado,lana fuliyo arrimihii hore loogu heshiiyay oo ah
: A)-In laga dhawraso wixii wada hadalada carqalad gelin kara.
B)-Inaan la siyaasadeyn deeqaha aadaminimada iyo mashaariicda dib u dhiska walibana la dhiirigeliyo
. C)-In la fuliyo heshiiskii hawadda iyadoo farsamo lagu salaynayo wixii lagu heshiiyay.
Wasiir Maxamuud Xaashi qodobka uu lahaa dawlada Somaliya ha ixtiraato waa Qodobka 2aad farqadiisa B)-Inaan la siyaasadeyn deeqaha aadaminimada iyo mashaariicda dib u dhiska walibana la dhiirigeliyo.”
heshiiskaasina waa kii dambeeyey ee labada Madaxweyne kala saxeexdaan ma jiro heshiiskaa ka dambeeyey, Soomaaliya heshiiskaasna way jabiyeen waxaanu ka shaqeyn waayey dhinaca dawlada Soomaaliya madaxdii dawladii hore ee Xasan Sheikh iyo madaxweynahan cusuba Farmajo bixitaankiisii u horeeyey ee uu ku tago dalka Sucuudiga waxa uu kala hadlay in la joojiyo heshiika Dekada iyo saldhigga millatari ee dawlada Imaaraadku la gashay dawladda jamhuuriyadda Somaliland. Haddaba miyaanay kaaf iyo kala dheeri ahayn, dawladaha Soomaaliya ee diidan hurumarka iyo xidhiidhka caalamigaa ee u soo kordhaya qaranka Somaliland. mar kasta inaynu innagu u noqono kuwo si dadban ugu adeegaya rumeysanayeyna Borobogaandaha iyo beenta ay faafinayaan bulshadeenan daacada ah ee caadifada iyo hubsiimo la’aantuna dariska la noqotay loogu turjumayaa waxa heshiiska wada saxeexay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo Madaxweynaheenna Mudane Axmed Siilaanyo. Mana jirto sabab aynu dawlada Soomaaliya ula saxeexano Heshiiska Dekada iyo Madaarka Berbera. goormay Soomaaliya noqotay dawladii EMARITE ee heshiiku aynu la galnay?.ummada waxa lagu majaro habaabinayaa daacadnimdooda awgeed.
ma oga inaynu heshiis la gali karno dawladaha aynu danaha kala leenahay inaynu xidhiidh diblomaasiyadeed iyo mid ganacsiba ka wada xaajoon karno innagoon haysan aqoonsi sida xidhiidhkan Somliland iyo Emirate-ka. Waxaa innoo ogal qawaaniinta caalimiga ah sida (“De Jure” ) and (“De facto States “) ayaa dhigaya in waddamada aan ictiraafka haysani la sameysan karaan xidhiidh ganacsi, dhaqaale, nabadgalyo, maalgashi iyo mid Diblomaasiyadeedba, Inay la dawladaha Qarrammada Midoobay kuraasta iyo calanka ku leh qodabkani waa ka Ethiopia, Kenya, Emeriteska iyo dawlado kalaba kula xidhiidhno qaarkoodna safaarado innoogu ogolaadeen.
hadaba kireynta Dekada Iyo Madaarkuna waa talaabo xaga horumarka loo qaday, dadkana yaan lagu baqo galin Xuutiga ayaa ina soo weerarayee ummad iyo dal kastaaba danahooda ayey raacaan oo ilaashadaan danteenna aynu ilaashano. Faa’iido badan baana inoogu jirta , waxaynu ka helaynaa shaqo abuur iyo inay lacag adag wadanka soo galiyaan waxay inoo sahlaysaa inynu shirkado kale iyo wadamo kale xidhiidho la sameysano aduunka oo aynu aduunka ku xidhano sida wadan yar ee Djibouti ee 7da dawladood wajoogaan ,dawladba dawladbay soo eegatay .
Waxaan Bulshada iyo Xisbiyada qarankaba u soo jeedin lahaa inaynu dhaqankeenan imika ee sallaysan ku jiqsiida siyaasadda wax ka bedalo oo wixii danta,dalka,dadka,diinta iyo qarankaba faa’iido u leh la taageero oo aan laga hor iminin. Wixii sixitaan u baahna si anshax leh loo tilmaamo.
Mustafa Ismaaciil Cabdi
(IR& Diplomacy MA Candidate)